Tsamba kubva kuna Jane Austen kune hanzvadzi yake Cassandra | Zvazvino Zvinyorwa
Tsamba kubva kuna Jane Austen kune hanzvadzi yake Cassandra
Carmen Guillen | | Vanyori, dzakawanda
Jane Austen anga asina kukodzera kuzivikanwa muhupenyu, kutaura kwekunyora, asi mabasa ake, mushure mekufa kwake, ave makuru makuru e zvinyorwa zvekare inenge inofanirwa-kuverenga. Tinofanira kurangarira kuti izvi munyori ane ruzivo aifanirwa kunyora enganonyorwa dzake asingazivikanwe, zvinyorwa zvakaita se «Zvinoreva uye Kunzwisisa ", «Kuzvikudza uye rusaruro " y «Emma », kungodudza matatu chete. Sezvakaitika kuna George Orwell, mune chinyorwa chakanyorwa mazuva mashoma apfuura kuti iwe unogona kuverenga pano, Jane Austen Akanyorawo tsamba dzakawanda, kunyanya kushamwari yake yepamwoyo uye nasisi, Cassandra Austen. Vazhinji vavo vakaparadzwa asi kuchine mazana maviri. Pakati pavo tese tasarudza iyi yandichadudzira pazasi, a Tsamba yakabva kuna Jane Austen kuna sisi vake Cassandra:
China, Mbudzi 20, 1800.
Wangu mudiwa Cassandra,
Tsamba yako yanditorera kushamisika mangwanani ano; Izvo zvave zvichigamuchirwa kwazvo, zvakadaro, uye ndinozvitenda zvikuru nazvo. Ndinofunga ndanga ndine waini yakawandisa manheru apfuura muHurstbourne; Handizive kuti chiizve chingave chiri kukonzera ruoko rwangu kuzunza izvozvi. Naizvozvo, ndokumbira undiregererewo chero kukanganisa mukunyora kwetsamba iyi.
Chido chako chekunzwa nezveSvondo yangu, pamwe, chichava chakakuomera kuti unzwisise, nekuti munhu anogona kufunga zvakanyanya pamusoro pemhando idzi dzezvinhu mangwanani mushure mekunge zvaitika, kupfuura pazviri kuitika.
Akanga ari masikati akanaka. Charles akamuwana achishamisa zvakadaro, asi ini handigoni kutaura kuti sei, kunze kwekunge kusavapo kwaMiss Terry, uyo hana yake ichimushora iye nekuve nekusave nehanya kwakakwana, kwaive kumuzorodza. Paingova nematambiro gumi nemaviri chete, ayo ndakatamba mapfumbamwe, mamwe ese handina kukwanisa kutamba nekuda kwekushaya shamwari. Takatanga pagumi, takadya kudya kwemanheru panguva imwe chete, uye takaenda kuDeane nguva isati yasvika mashanu. Mumba maive musina vanhu vaidarika makumi mashanu; mhuri shomashoma, muchokwadi, kudivi redu redunhu, uye kwete mamwe akawanda kubva kune vamwe. Vandaifamba navo vaive vaviri vechidiki vaJohns, Hooper naHolder, uye vaiyevedza zvikuru VaMathew, wandakatamba navo kwekupedzisira.
Paive nerunako rudiki kwazvo, uye sezvaitarisirwa, hapana runako. Miss Iremonger haana kutaridzika zvakanaka, uye Mr Blount ndivo vega vanoyemurwa. Akaonekwa chaizvo sezvaakaita munaGunyana, aine kumeso kwakafara kumeso, akaputirwa nemadhaimani, shangu chena, murume akapinki, uye mutsipa wakakora. Ivo vaviri Miss Coxes vaivapo: Ndakaita hurukuro nemusikana wakajairika, uyo akatamba kuEnham makore masere apfuura; imwe yakanatswa, musikana akanaka ane ramangwana rakanaka, Catalina Bigg. Ndakatarisa kuna VaThomas Champneys ndikafunga nezvaRosalie murombo. Ndakatarisa mwanasikana uye iye aiita kunge mhuka inoshamisa ine kora chena. Mai Warren, vanondimanikidza kufunga, mukadzi akanaka kwazvo, anondirwadza zvikuru. Akakwanisa kubvisa chikamu chekutamba kwemwanakomana wake uye akatamba nebasa rakakura. Murume wavo akashata zvakanyanya, uye akashata kupfuura hama yake Juan; asi haaratidze kunge akura zvakadaro. Vakadzi veMaitland vese vakanaka, vakaita saAnne, vane ganda rakasviba, maziso akasviba makuru, uye mhino yakanaka. Mukuru ane gout, uye Mai Maitland vane jaundice. Miss Debary, Susan naSally, vakapfeka zvitema, vapfupi muchimiro, vakaonekwa, uye ini ndaive ndakamira pamberi pavo zvakanyanya sekufema kwavo kwakanditendera.
Maria akandiudza kuti ndaitaridzika zvakanaka chaizvo. Ndakapfeka dhirezi ramaiguru pamwe neskafu uye vhudzi rangu raive rakashambidzika, zvinova ndizvo zvaiva shungu dzangu.
Takaita zuva rakanaka kwazvo nemusi weMuvhuro kuAshe, takagara gumi nemana pakudya kwemanheru muchidzidzo, muimba yekudyira zvaive zvisina kujairika kubvira dutu parakaunza nzvimbo yaro yemoto. Mai Bramston vakataura kwenguva yakareba, iyo Mr. Bramston na Mr. Secretary vakaita kunge vakaenzana kunakidzwa. Paive nemuridzo uye tafura yemakasino, uye vatanhatu vekunze. Mupunga naLucy vakaita rudo, Mat. Robinson akarara, James naAmai Augusta vakaverengera pepa raDkt Finnis pa 'pox-pox', uye akandipa kambani yanguwo.
VaDigweed vatatu vakasvika neChipiri uye takatamba mudziva pabasa. James Digweed abva kuHampshire nhasi. Ini ndinofunga inofanirwa kunge iri murudo kwauri, nekuda kwekushushikana kwako nezvekuenda kumabhora eFeversham, uye nekusavapo kwako Haisi pfungwa yakashinga here? Izvo hazvina kumboitika kwandiri zvisati zvaitika, asi ini ndinotya kutaura kuti zvakaitika.
Sara mushe; Charles anomutumira rudo rwake rwepamusoro uye Edward wake akaipisisa. Kana iwe uchifunga kuti mutsauko hauna kukodzera, unogona kuzviita iwe pachako. Iye achakunyorerai paanodzokera kuchikepe chake, uye panguva ino ndinomuda kuti andione sa
hanzvadzi yake ine rudo, JA.
1 Pfupi Biography yaJane Austen: Hupenyu uye Zvinyorwa
1.1 Akaburitswa enganonyorwa
2 Akakurumbira makotesheni naJane Austen
Pfupi Biography yaJane Austen: Hupenyu uye Zvinyorwa
Mufananidzo kubva mufirimu «Emma»
Jane Austen akaberekwa muSteventon musi waDecember 16, 1775. Akakurira mumhuri yakapfuma yemagariro bourgeoisie uye akararama iyo nguva inozivikanwa se Iyo Regency. Anenge mabasa ake ese akanyorwa pasi pezita rekunyepedzera uye rutsigiro rwake rukuru aive Sir Walter Scott uyo akasimudzira basa rake nekuda kwekuongorora kwake kwakanaka kweruzivo rwake «Emma.
Mamwe emabhuku ake akaunzwa kuchikuru hombe, kesi inozivikanwa uye yakatumidzwa zita Kuzvikudza uye Kusarura.
Muanenge ese mabhuku ake anotaura nezverudo, zvinova zvisina musoro kana Jane Austen haana kudzora kuroora uye aisazvida. Ndokusaka irwo rwakati rudo rudo, rwakavakirwa pamusoro pezvese pane yekutarisa kwekunze.
"Pfungwa uye Kunzwisisa" (1811).
"Kudada uye Kusarura" (1813).
"Abbey Northanger" (1818), basa rekufa.
"Kunyengetedza" (1818), basa rekufa.
Jane Austen akashaya Chikunguru 18, 1817 muWinchester. Su guva Icho chiri kuchamhembe chetatu chetemberi ye Winchester nhare, iyo inoshanyirwa kushanya kwezuva nezuva nekuti zvisaririra zvemunyori zvakavigwa ipapo.
Akakurumbira makotesheni naJane Austen
“Hazvina maturo uye kudada zvinhu zvakasiyana, kunyangwe mazwi acho achiwanzoshandiswa zvakafanana. Munhu anogona kudada pasina kuva asina maturo. Kuzvikudza kwakanyanya kuenderana nemaonero edu pachedu: zvisina maturo, nezvatinoda kuti vamwe vafunge nezvedu.
"Kuzvifunga kunofanira kuregererwa nguva dzose, nekuti hapana tariro yekurapwa."
"Kushaikwa kwerupo kwehama dzake kunomutungamira kushamisika nekuwana hushamwari kumwe kunhu."
"Ndinotenda kuti mumunhu wese mune hunhu kune chakashata, kune hurema hwomuzvarirwo, uhwo kunyange dzidzo yepamusoro isingakunde."
"Ini ndinongoda kuita nenzira inoenderana, mumaonero angu, nerufaro rwangu rwemunguva yemberi, zvisinei nezvaunofunga iwe kana ani zvake kunze kwangu."
«Kazhinji isu tese tinotanga nekadiki zvido, uye izvo zvinogona kungove nekuti, pasina chikonzero; asi kune vashoma kwazvo vane moyo wakawandisa wekudanana vasina kukurudzirwa ».
"Asi chero bedzi vanhu vachibvumira kutakurwa nemafungiro avo kuti vagadzire zvisirizvo pamusoro pemaitiro edu uye vazvikwanise zvichibva pakuonekwa chete, mufaro wedu unogara uripo pakunzwira mukana."
"Zvinokurumidza sei kusimuka zvikonzero zvekubvumidza zvatinoda!"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Tsamba kubva kuna Jane Austen kune hanzvadzi yake Cassandra